In kabadan nus milyan qaxooti ku ah Uganda - BBC Somali
In kabadan nus milyan qaxooti ku ah Uganda
16 Disembar 2015
Image caption Qaxootiga Uganda
Tirada dadka qaxootiga ah iyo kuwa magangalyo doonka ah ee ku nool dalka Uganda ayaa kor u dhaafay 500,000. oo kun (nus milyan)
Waa tiradii ugu badnayd ee qaxooti ah ee uu dalkaasi martigaliyo abid.
Badankoodu waxay ka kala yimaadeen South Sudan, Burundi, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, Soomaalia iyo Rwanda.
Wasaradda u diyaargarawga masiibooyinka iyo arrimaha qaxootiga ee Uganda iyo hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegay in sanadkan oo kali ah ay qaabileen sagaashan kun oo qaxooti ah.
Wadankaasi Bariga Afrika ku yaala waxa uu kaalinta saddexaad kaga jiraa wadamada qaxootiga ugu badan martigaliyay ee gobolka waxaana ka horeeya Itoobiya iyo Kenya oo kali ah.
Dagaalada sokeeye ee ka dhacay wadamada harooyinka waawayn leh ee Afrika iyo kuwa ka dhacay Geeska Afrika, ayaa horseeday in ay baro kacaan malaayiin dad ah, qaar badan oo ka mid ahna waxay waxay ammaan u raadsadeen dalalka dariska la ah.
Dalka Uganda waxaa aad loogu ammaanay qaabka ay dadka u soo dhaweeyaan, qaxootiga waxaa la siiyaa dhul ay dalag ka beertaan waxaana la dajiyaa tuulooyinka iyaga oo dhex gala bulshada deegaanadaasi.
James Duddridge, oo ah wasiirka Boqortooyada Ingiriiska u qaabilsan Afrika, oo hadda booqasho ku jooga dalka Uganda ayaa balan qaaday in uu kaalmo dheeri ah siin doono Uganda si ay wax oogaga qabtaan xaaladda qaxootiga. Wuxuu sidoo kale booqan doonaa Rwanda iyo Brundi.
Britain waxay hay'adaha Qaramada Midoobay ee ka hawlgala Uganda siisay in kabadan 17 milyan oo doolar sanadkan 2015-ka.
Hay'adahaasi waxaa ka mid ah, kuwa Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga, Caruurta iyo Hay'adda Cuntada Adduunka.